News Collection: आमा बन्न रेखाको बिश्राम ?
आमा बन्न रेखाको बिश्राम ?
नायिका रेखा थापा अव सिनेमा क्षेत्रवाट विश्राम लिने सोंचमा छिन् । १० वर्षदेखि नेपाली सिनेमामा सक्रिय यि नायिकाले अवको २ वर्षपछि विश्राम लिएर वस्ने वताएकी छिन् ।
नायिका थापा २ वर्षसम्म अहिले आफुले एगि्रमेन्ट गरेका सिनेमा सिध्याउने धुनमा छिन् । ‘त्यसपछि भने म केही वर्ष विश्राम लिने सोंचमा छु ।’- सिनेमा क्षेत्रमा लागेर १० वर्षसम्म अनवरत सेवा गरेकी रेखा एक भेटमा भन्दै थिईन्, हेरौ-’सिनेमा क्षेत्र कतातर्फ जादो रहेछ ।’
रेखाको विश्लेषण छ- नेपाली सिनेमा क्षेत्र अव कि सकिन्छ कि फस्टाएर आउँछ । यसरी, २ वर्षपछि रेखा थापा विश्राम लिने सोँच वोकीरहेकी छिन् ।
रेखाले विश्राम लिन खोज्नुको कारण आखीर के त ? कि रेखा २ वर्षपछि आमा वन्ने सोचाई राख्दै छिन् ? आमा वन्न मन लागेको भनाई उनले अनलाईन खवरवाट नै सार्वजनिक गरेकी थिईन् । २ वर्षपछि आमा वनेर वच्चा हुर्काउनका लागि उनले केही समय विश्रामको वाटो खोजेकी हुन् त ?
नेपाली सिनेमा क्षेत्रका नायिकाहरु आमा वनिसकेपछि केही वर्ष विश्राम लिईरहेका छन् । पति छवि ओझासँग कुरा मिलेको खण्डमा उनी सन्तान सुखको अनुभव लिन हौसिनेछिन भन्ने उनका सहकर्मीको दावी छ । छविले रेखाका सन्तान दिन नमानेपछि उनीहरुवीच सम्बन्ध बिगि्रएको वताइन्छ ।